Horumarinta Hormoon ee Bangkok. Isticmaalka hormoonka koritaanka ee Thailand
Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo daroogada in dad badani la daboolay
daahir sir ah. Daroogada mucjisada ah waxaa lagu magacaabaa hormoonka koritaanka.
Hormoonka koritaanka (hormoonka koritaanka, STH, HGH, somatotropin, somatropin) waa
hormoonka peptide ee lingarka dambe ee qanjirada pituitary, loo isticmaalo
ciyaaraha isboortiga loogu talagalay sameynta xanuunka muruqa. Waxaa markii hore loo qoondeeyay
ee 1956. Hoosta magaca hoormoonka koritaanka ama somatotropin (laga bilaabo Laatiin
xayawaanka - jirka) sababtoo ah dadka dhallin-yarada ah waxay keenaa dardargelinta
koritaanka tooska ah, badanaa waxaa sabab u ah kordhinta lafaha tubbada dheer ee ka mid ah
Hormar kobaca ayaa lagu sii daayaa qanjirada pituitary ee jawaabta
calaamadaha hypothalamus. Qiyaastii labaatan sano kadib, a
Qofku wuxuu yareeyaa wax soo saarka hoormoonka jirka. Da'da
jirku wuxuu la xiriiraa heerka hormoonka koritaanka hormoonka. Kadibna
Sannad kasta 10 heerka wax soo saarka hormoonka koritaanka ayaa hoos u dhacaya 15%.
Hormar kobcinta ma laha kala duwanaansho galmo. Heerkiisu wuu isku mid yahay
ragga iyo dumarka. In kasta oo xaqiiqda ah in isticmaalka daroogada ay ku jirto
hormoonada koritaanka ayaa mamnuuc ah WADO (Ururka La-Dagaalanka Doping World),
ee Thailand, daawooyinkan si xor ah ayaa loo heli karaa.
Faa'iidooyinka hormoonka koritaanka waa mid aan la aqbali karin - ma jiraan wax badan
nafaqada isboortiga, peptides, ama xitaa antiriteriyada stabdhabka. Waxaa la rumeysan yahay
in hormoonka koritaanka uu saameyn wanaagsan ku yeesho xasuusta, waxa uu ka celiyaa
geedi socodka gabowga iyo maqaarka ka sii yar.
Sidoo kale, faa'iidooyinkeeda ugu weyni waa: yareynta dufanka jidhka oo kordhay, kor u kaca
ee xajmiga muruqyada, hoos u dhaca tirada lakabka iyo ka hortagga
lafdhabarta mustaqbalka, cufnaanta lafaha ee kordhinta lafaha iyo
xoojinta nidaamka difaaca.
Waxaa la rumeysan yahay in caanka ah Demi Moore, Robbie Williams iyo Madonna
Isticmaalka hormoonnada loo isticmaalo, iyo Stallone xitaa waxay ka soo baxday sharci darro
gaadiidka hormoonka koritaanka weyn ee xuduudaha Australia,
si buuxda sharci ahaan u siiyay Thailand.
Takhaatiirta shahaadada leh ee ku takhasusay duritaanka hoormoonka koritaanka ayaa aaminsan in
Khatarta uu u qabo taageerayaashiisa waa hal shay oo keliya - si ay u ordo qiyaano. Noocan ah
Daaweynta waa raqiis, iyo iibsan hormoon internet, waxaa jira
khatarta ah in la helo walax aan ahayn had iyo jeer aan la fahmi karin
Inkasta oo ay jiraan fikrad kale oo ka mid ah cilmi-baarayaasha kuwaas oo soo jeedinaya
Qalabka dib u dhiska ee daroogada ayaa aad u buunbuuniyay. Iyo
in hormoonka koritaanka uu xitaa waxyeeli karo jirka.
Dib u eegista qaar, HGH waxaa lagu tiriyaa waxyeelo, taas oo fudud
ma kari karo. Tusaale ahaan, kororka caloosha ayaa leh wax cilmi ah
xaqiijin. Tani waxay macquul tahay aragti keliya marka la isku daro HGH
steroids iyo qaadashada qadar aad u weyn oo cunto ah
Sidoo kale, hoormoonka korontada ma saameynayo heerka testosterone, libido
iyo ficil galmo, ka duwan sida steroids. Horumarka koritaanka ee ragga waa arrin caadi ah
ammaan ah marka la eego ciriiriga khatarta ah. In Thailand, waxaa sidoo kale la rumeysan yahay
in HGH ay sababto burooyin, laakiin tani waxay horay u beenisay daraasadda. Waxay awoodi kartaa
kaliya kicin kara horumarka degdegga ah ee burooyinka hore ee jira (ka hor
bilawga hormoonka koritaanka waxaa lagama maarmaan u ah in la baaro
Ka saarida horumarinta hababkaas).
Horumarinta waxyeelo muhiim ah marka la isticmaalayo talooyinka
Qiyaasaha la oggol yahay ee hoormoonka koritaanka waa mid aan macquul ahayn. Waa hagaag, jidka
oo ku saabsan saameyno yar yar, waxaan dhihi karnaa in si fudud loo baabi'iyo,
inta badan iyada oo aan lahayn daawooyin dheeraad ah.
Ka dib tan guud ahaan, waxaa lagu doodi karaa hormoonka koritaanka
waa daroogo ammaan ah. Sida laga soo xigtay xubnaha jirka ee Thailand, 88% kuwaas
qaadashada HGH waxay u tixgelisaa daroogo wax ku ool ah. Sidoo kale, 86% ayaa runtii muujiyay
gubitaanka oo la ogaan karo iyo faa'iidada muruqyada. Kororka
tilmaamayaasha awoodda ayaa lagu xusay 79%. Isla mar ahaantaana, in ka badan 80% of
jawaabeyaasha si aad ah u u dulqaadan cirbadaha hormoonka koritaanka. Sidee
saameynta waxaa lagu ogaaday kaliya 23 boqolkiiba ciyaartoy cayaaraya oo dhexdhexaad ah
qiyaasaha hormoonka. Asal ahaan, caqabadda ugu weyn ee ay ku qabaan iyaga
ma aha khatarta, laakiin qiimaha sarreeya ee qiimaha hormarka koritaanka.
Qof kasta oo go'aansaday inuu bilaabo hormoonka koritaanka waa inuu qaataa
daryeesho ma aha oo keliya miisaan maaliyadeed oo ku filan (ka dib oo dhan, hoormoonka
waxqabadka marmar la isticmaalo ama isticmaalka qadar yar ayaa daciif ah), laakiin
sidoo kale ku saabsan alaabta tayada la soo iibsaday.